Otu ọrụ aka - Yangzhou qiangjing egwuregwu ihe egwuregwu Co., Ltd.
Na-emegide ngbanwe nke usoro nke ihe eji egwu egwu n’egwuregwu egwuregwu na mmụba banyere mmega ahụ nkịtị, iwebata na mmejuputa iwu dị mma, mmepe nke ụlọ ọrụ egwuregwu ga-eweta 'oge kacha mma.' Chainlọ ọrụ egwuregwu ahụ etolitewo n'ụzọ ọrịrị, usoro ịzụ ahịa esiwanye ike, oghere ahịa maka ụlọ ọrụ metụtara ya buru ibu.
Site na mmụba nke ego ndị bi na ụlọ, mmata nke ndị bi na egwuregwu na mgbatị ahụ na-abawanye, ihe ndị a chọrọ maka ụdị nke ihe eji egbochi nchekwa egwuregwu na-abawanye. A na - akwụkarị ụgwọ iji were ndị ọrụ ụlọ ọrụ ụwa ụlọ ọrụ iji mepụta akara gị • DHS, otu n'ime egwuregwu egwuregwu ole na ole nwere mmetụta mba ụwa na China; • YONEX, raketịlị ụwa ama ama.
Site na mbọ nke ndị na-ere ahịa na ndị otu azụmaahịa, ndị mmekọ na ahịa: Na mgbakwunye na ụlọ ndị isi, a na-ebuga ngwaahịa nchekwa ihe egwuregwu anyị na North America, Europe, Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.